ဈေးဝယ်စင်တာသို့တစ်ခေါက် — Steemit
ကျွန်မအမေနဲ့ကျွန်မဈေးဝယ်ရှုပ်ထွေးသော၏မြေညီထပ်မှရရန်မြေအောက်ကားတစ်စီး-ပန်းခြံ၏ဒုတိယအဆင့်ကိုကနေဓာတ်လှေကားကိုယူ။ ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အေးမြသောလေထုတစ်ပေါက်ကွဲမှုနှင့်အနီးတဝိုက်တွင်ဂီတဆိုင်ကနေဂီတ၏ blare အားဖြင့်ရင်းရင်းနှီးနှီးနှုတ်ဆက်ခဲ့ဓာတ်လှေကားထဲကတိုးမြှင်။ အဆိုပါကားကို-ပန်းခြံမှောင်မိုက်ခြင်းနှင့်တွေများခဲ့ပါတယ်။ မြေညီထပ်တောက်ပနှင့်သွက်ခဲ့ပါတယ်။
ကျနော်တို့ကြီးမားဈေးဝယ်ရှုပ်ထွေးသော၏နားခန်းမှာရှိကြ၏။ အဲဒီမှာလူများစွာရှိခဲ့သည်။ ငါနှစ်ခုဂီတဆိုင်များ, တစ်ဦးဆေးဆိုင်နှစ်ခုစာအုပ်ငျးကုတစ်ဦးသည်ဗီဒီယိုဆိုင်တစ်ခုမျက်လုံးဆရာဝန်ရဲ့ဆိုင်နှင့်တစ်ဦးကြီးမားတဲ့ super- ဈေးကွက်တစ်ခုသွန်းရဲ့ဆိုင်ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။
နှဈခုကအရမ်းဟောင်းအစောင့်သွန်းရဲ့ဆိုင်များ၏ရှေ့မှောက်၌ထိုင်တော်မူ၏။ သူတို့ကချွတ်ခေါင်းတဆတ်ဆတ်ငြိမ်ခဲ့ကြသည်။ ဓားပြဆိုင်လာရန်ဖြစ်လျှင်သူတို့ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်မအံ့ဩကြ၏။ သူတို့တတျနိုငျသတူသောဒါဟာမကြည့်ခဲ့ပေ။
အဝတ်တစ်ဦးက "ဈေးပေါရောင်းချမှု" ဟုနားခန်း၏အလယ်၌သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အဲဒီမှာလူအစုအဝေးကအဝတ်အနီးရဖို့မဖြစ်နိုင်ခဲ့နိုင်အောင်ထူခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့အရူးလူအစုအဝေးအတိတ်နှင့်စူပါမားကတ်သို့သွားလာ၏။
ကုန်စည်အတန်းများနှင့်တန်းစူပါမားကက်ထဲမှာရှိခဲ့သည်။ ကျနော်တို့လိုအမှုအရာမှထွက်ကောက်ယူပြီးပုံဖမ်းတွန်းလှည်း၌ထားတော်မူ၏။ ကျနော်တို့လက်စသတ်ပြီးမှကျွန်မရဲ့မိခင်ကျနော်တို့ ယူ. အရာများအတွက်ပေးဆောင်ရှိရာစစ်ဆေးမှုများထွက်တန်ပြန်ဖို့ပုံဖမ်းတွန်းလှည်းတွန်း။ ကံကောင်းထောက်မစွာစူပါမားကက်ထဲမှာလူအနည်းငယ်ရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါဈေးပေါရောင်းချရန်လူအစုအဝေးဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အဘို့သညျ လာ. အဘယ်အရာကိုဝယ်ခြင်းငှါရှည်စွာကျွန်တော်တို့ကို ယူ. မသွားခဲ့ပါဘူး။
ကျနော်တို့စူပါမားကတ်ထဲက လာ. , အရူးလူစုလူဝေးလွန်။ ငါသွန်းရဲ့အမှာအဟောင်းအစောင့်တစ်ဦးအမှန်တကယ် သတိပြုမိ! မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုကျနော်တို့ကဓာတ်လှေကားဆက်လက်နှင့်ဈေးဝယ်ရှုပ်ထွေးထားခဲ့တယ်။
esteem going shopping complex time